Ity no lahatsoratra vahiny avy Laura, ny mponina manam-pahaizana manokana momba ny vehivavy mandeha. Italia no malaza siny-lisitr’ireo zavatra noho ny ankamaroan’ny olona, saingy ny s ny be sy ny samihafa firenena nita. Amin’ny tsy mijanona tanim-boaloboka mba tsy manam-pahataperana ny gliosida (taonina sy hizaha tany eo), indro ny zazavavy s mpitarika ny fikarohana Italia. Ny antony travel Italia dia tahaka ny isan-karazany toy ny gelato tsirony. Ny olona sasany dia mandeha mba hahazoana ny tsiron’ny tantara, raha ny hafa handray anjara amin’ny asa ivelan’ny trano. Ho ahy, Italia rehetra mikasika ny indolzansy sy overindulgences. Avy amin’ny maritrano ny sakafo ny divay ho amin’ny fiainana, Italiana mandeha avy rehetra. Fantatr’izy ireo ny fomba mba hihinana, dia ho fantatrao ny fomba fitafy, ary fantaro ny antoko. Ny vehivavy dia tokony hanao ny fivahiniana masina ho an’i Italia tamin’ny fotoana iray na iray hafa mahita sy mandray avy any Italia ny fahafinaretana, izay ahitana ny manaraka izao: italiana ny olona dia Aoka isika hanapaka tsara ny hividy: italiana lehilahy tsara tarehy. Ny fehezan-teny lava, maizina, ary tsara tarehy dia angamba namorona any Italia. Mieritreritra aho fa tena mahitsy ny vehivavy mahita italiana ny olona mba ho mora eo ny maso, toy izany koa raha toa ny olona dia mijery ny zavatra, ary avy eo dia diniho ny sasin-tenin’ny Italia. Ny olona eto dia tena suave ary ataovy mora ho raiki-pitia azy izy ireo, izay moa t zavatra ratsy. Sary sokitra Raha italiana lehilahy tsy hanao izany ho anareo, angamba ny tsara sculpted ireo aza. Izy ireo dia matetika manana chiseled napetraka ny abs, tsy hampiasa teny ratsy ny andalana, ary ireo fitafiana tena kely, raha misy, ny fitafiana. Michelangelo ny Davida dia iray amin’ireo Italia malaza indrindra sary sokitra. Raha toa ianao mitsidika Florence, jereo ny contrapposto hampidi sy mahita ny fomba izany no fahagagana ho mampidera ny olo-malaza. Raha toa ka tsy maniry ny handoa mba jereo ny David, dia nisy roa lahy koa manaitra replicas ao an-tanàna. Azonao atao ihany koa ny lohany manapaka ny Uffizi Gallery mahita be dia be Renaissance sikotra ary zavakanto amin’ny toerana iray. Gliosida Izany no zava-misy: ny vehivavy mitady mafy carbs kokoa noho ny lehilahy. Ka nahoana no tsy manome fahafaham-po ny faniriany amin’ny pizza, lasagna, paty, sy ny mofo. Aho somary sasany Italia hanome ny ratsan-ny Atkins diet raha mety. Italiana miezaka ny mihinana ny mofo isaky ny sakafo, ary na dia mavesatra sakafo, italiana paty sy ny pizza no tiany indrindra. Raha ny toetr’andro dia tsara, an-kalamanjana ny sakafo hariva amin’ny labozia. Ary raha tokony haka ny hihinana haingana hihinana, afaka foana ny haka ny silaka ny pizza ho roa fotsiny euros. Julia Roberts ao Mihinana, Hivavaka, ny Fitiavana nanana olana mety ho jeans, taorian’ny volana vitsivitsy tao Italia nandritra ny antony. Gelato Gelaterias ao Italia dia tahaka ny -s tao Bangkok: ry zareo na aiza na aiza, ka antenaina fa efa nandao ny toerana ho tsindrin-tsakafo taorian’ny fiara-mavesatra sakafo. Ny s heloka tsy mba toy ny italiana gilasy. Sarotra ny fofona ny vao avy nanao cones, ka jereo ny maro isan-karazany izy tsirony ary tsy ho alaim-panahy ny dingana ao anatiny. Misy maro matsiro tsirony fa mety ho sarotra ny hifidy fotsiny ny olona iray. Raha afaka nanam ny efitrano, hahatonga ny fanapahan-kevitra mora sy hahazo roa mandavaka (Nutella, voanio, sy sokola misy ny olona tena tiany). Ary raha ny faniriany ny fitokonana, aza matahotra ny efa gelato eo amin’ny toerana ny sakafo. Aho hilaza ny tenako,»Rehefa ao Italia»mba hanala tsiny ny gelato-ny fahazarana mihinana sakafo misy. Mpifindrafindra monina Matt milaza hoe: tiako ny paoma tsirony, ary raha toa ianao indray nahantona, na inona na inona nanasitrana azy toy ny voasarimakirana gelato. Vino tiako tsara ny fitaratra ny divay amin’ny sakafo hariva. Italia ny divay faritra dia feno hipoka feno ny tanim-boaloboka. Misy divay faritra tao Italia, ka ianao maintsy ho nandeha akaiky ny iray amin’izy ireo. Azonao atao ny voalamina tanim-boaloboka fitetezam-paritra, izay ahitana hatrany ny tsiro. Buying divay tao ny fivarotana any Italia, koa ny ridiculously levitra, ka manana isan’alina fitaratra (na tavoahangy) ny divay dia mora atao eo amin’ny misy ny teti-bola. Ny maritrano tsy mila fototra ao amin’ny famolavolana ny mankasitraka ny manaitra ny maritrano ao Italia. Ny firenena fantatra indrindra amin’ny Romanina fahiny sy ny Renaissance trano. Misy mahaliana rafitra na aiza na aiza ianao kosa. Mankafy ny mpitsabo nify ao Roma, ny Duomo ao Florence, ny loko trano amin’ny Burano, na Italia s amazing piazzas (vahoaka ny kianja). An’arivony taona ny tantara, Italia maro dia manolotra zavatra mahatalanjona ny mahita. Carnevale tiako akanjo tonta, ary tsara tarehy aho antoka fa Venise ao Carnevale no ho farany iray ny manatrika. Ny fe-potoana ny akanjo sy ny saron-tava mamorona singa zava-miafina izany efa mahavariana tanàna. Carnevale manomboka manodidina ny roa herinandro talohan’ny Ash alarobia lasa teo ary mifarana amin’ny Mardi Gras (ny andro alohan’ny Ash alarobia). Raha mbola afaka mijoro ho any vahoaka be dia be, fisoloana akanjo ho an’ny Carnevale dia manasongadina amin’ny italiana ny faritany haleha izy. Miantsena aho Raha eo amin’ny resaka akanjo, ny kiraro hoditra ary purses ao Florence, miaraka amin ny lamaody vao misondrotra-toerana dia manome fahafaham-po na inona na inona boribory ny faniriana. Misy ny lehibe ny kely boutiques amin’ny zavatra tsy manam-paharoa ary koa be dia be ny mpivarotra eny an-dalambe mba peruse. Gucci, Prada, ary ny arivo hafa endrika manao ny tranony ao Italia. Ianao ll mahita ny zava-drehetra ianao te. Manao toerana fanampiny ao amin’ny kitapo ho an’ny rehetra ny chic akanjo ianao ll volana ny namana any an-tanindrazana. Italia dia kely ny tsirony any an-danitra ho an’ny vehivavy mpanao dia lavitra. Raha tiako ny zava-kanto sy ny maritrano ao Italia, misy ihany koa ny sexy olona, fampiononana ny sakafo sy ny zava-pisotro, ary hamelabelatra ny hetsika izay manodidina avy ny antony mahatonga ny vehivavy rehetra dia tokony manaram-po amin’ny nankany Italia. Laura Walker mitantana ny tranonkala Iray Nirenireny Hany. Izy amin’izao fotoana izao dia mitoetra ao Portland aiza izy no mitantana Masha, ny kojakoja sy entana an-trano brand vokarina ao Afrika Atsinanana. Ankoatra ny mihazakazaka ny raharaham-barotra, Laura miasa ho toy ny asa coach ho an’ny vao tonga ireo mpitsoa-ponenana ao an-tanàna. Izy no miasa amin’ny mpanjifa manerana izao tontolo izao sy ny fampiasana azy dia voafetra ny fahalalana ny teny Swahili hanompo Kongoley mpanjifa. Izy ihany koa manompo mpanjifa avy any Afovoany Atsinanana, Azia, ny firenena hafa any Afrika, Amerika Afovoany, ary Kiobà. Ho feno Iray-ho-Z mpitari-dalana amin’ny solo vehivavy mandeha, jereo Kristin s boky vaovao, Nandresy an-Tendrombohitra. Afa-tsy miresaka maro ny soso-kevitra azo ampiharina ny fanomanana sy ny fandaminana ny diany, ny boky miresaka ny tahotra, ny fiarovana, sy ny ara-pihetseham-po ny olana ireo vehivavy mikasika ny mandeha irery. Izany endri-javatra roa-polo tafatafa niaraka tamin’ireo hafa, vehivavy travel mpanoratra sy mpanao dia lavitra. Tsindrio eto mba hianatra bebe kokoa momba ny boky sy ny fomba izany dia afaka manampy anao, ary afaka manomboka ny famakiana izany amin’izao fotoana izao. Ny toerana tena anisan’ny velona ao Florence, dia nitsangantsangana ny alalan ny tsena. Ny olona TSIRAIRAY dia namely ahy. Ny OLON-drehetra. Na oviana na oviana aho rehefa ratsy ny andro, izaho te handeha an-tongotra ny alalan ny tsena sy hiala amin’ny zavatra tsara fanahy. Lehilahy, carbs sy ny fiantsenana. Tiako ny mieritreritra fa solo vehivavy mpandeha manana afa-nandositra ireo hevitra raiki-tampisaka amin’ny ankehitriny. Tsy azoko antoka aho nandritra ny olona, carbs, ary miantsena, ary mino aho fa izany dia ho heloka ho any Italia sy tsy miraharaha telo Plus, ny divay, ny maritrano sy ny Carnevale manampy amin’ny fahaiza-mandanjalanja avy amin’ireo sokajin-taona ireo. Toa ianao mahalala ny ratsy tonta kely loatra mihevitra aho fa tsara gelato no fanafody mahasitrana ny zava-drehetra. Christopher, miala tsiny aho mba hihaino anao tsy manana traikefa tsara any Italia. Mipetraka any Italia indraindray dia afaka ny ho mafy sy sarotra, saingy maro koa ireo lafiny tsara (gelato tafiditra.) fa mbola ho azy toerana manokana ho. Efa iray (na roa na telo) maro loatra ny slices ny pizza raha mbola misy, fa ny s mafy nitranga tamin’ny pizzerias ary tsy haka amin’ny silaka. Michelle, ataovy azo antoka anao any NAPLES ny pizza. Afaka indraindray ny mahita mendrika ny pizza any an-kafa any Italia, fa Bella Napoli dia izay nisy namorona. Mahafinaritra sy ny saina-nitsoka. Great Lahatsoratra. Manantena aho mba hanao izany mba Italia indray hanoratra lahatsoratra iray. Nandeha tany Milan tamin’ny taon-dasa mandritra lamaody herinandro, nefa tsy tena izay antenaina avy any Italia. Rehefa ny mpiara-miasa ary izaho no tany Italia ny taona vitsivitsy lasa izay dia nihinana gelato isaky ny iray andro sy, tamin’ny fotoana sasany, fotoana maro isan’andro. Koa, ny pizza tsara indrindra ve aho mbola nanandrana tao Naples. Oh, ahoana no te-hiverina any Italia Yay. Ka faly ianao nandeha tany Naples. Matetika dia odian-tsy hita rehefa hitsidika Italia. Tanteraka ny iray ny toerana tena tanàna eto amin’izao tontolo izao. Ity ny tsara lahatsoratra, ary izaho miombon-kevitra amin’ny ny sakafo sy ny trano anjara indrindra. Afaka mandany andro fotsiny ny fandehanana eny an-dalambe amin’ny anarana tanàna sy mihinana ny sakafo. Pizza sy gelato mazava ho azy hitondra ny toast Ha-ha, manaiky aho, raha italiana ny olona dia tsy ny zavatra, maritrano, ny hanina, ary ny divay vita ho azy heny. Ekeko izany: latsaka noho italiana olona. Soa ihany, izy no nilatsaka ho ahy koa. Tiako manana ny fitiavana, maneho hevitra, tsara tarehy hubby ary vonona fialan-tsiny mba handeha hamangy fianakaviana ao Roma sy Naples. Eny, manaiky izany aho Italia dia toy izany toerana mahafinaritra ho an’ny vehivavy. Izaho tia mandehandeha amin’ny alalan’ny tsena, ary nividy pashminas. Izaho koa vao notsofina hatrany ny kanto sy ny trano na aiza na aiza aho no nandeha tany. Efa tena mahatalanjona holatra risotto in Perugia ary toy izany matsiro gelato tany Roma sy Florence.
Tsy afaka miandry ny hiverina. Manaiky aho, misy dia t na inona na inona, tsy afaka hitia any Italia. Raha ny marina, raha niresaka mikasika ny mafana ny olona, ao Cinque Terre randy naka mandroboka sy nipetraka teo amin’ny vatolampy manaraka antsika amin’ny mandro italiana hatsaran-tarehy, tanteraka amin’ny mafana mavokely bikini akanjo sy ny volo tratra. Tao ny Fanjakana, dia ho lehibe, fa eo amin’ny vatolampy any Italia manaitra. Dia naka roa sary. Tsy maintsy. M ny lehilahy, fa izaho cryocooling amin’ny lahatsoratra ity. Izaho ve no mba Roma nandritra ny andro vitsivitsy, fa ny antsasaky ny fotoana nisy ny lany tao amin’ny Masoivoho Britanika (noho ny taloha, ary ny daroka baomba) noho izany dia tsy t hahazo efa ho toy ny be gelato sy ny pizza ny fotoana maha-te-ho tia. Oh well, heveriko ll maintsy mandeha indray aho ve no monina ao Italia ho herintaona izao ka hahafantatra izany dia tena tsara ary tsy maintsy manaiky ny sakafo sy ny gilasy ka tsara indrindra hatramin’izay. Saingy tsy ny olona rehetra dia lava, maizina sy tsara tarehy, indrindra fa raha ianao sm ny haavony tahaka ahy, mbola maro amin’izy ireo no fohy.
Mihevitra aho fa maro ny fanehoan-kevitra eto dia ahitana ny ratsy indrindra ny lisitry ny mahazatra-toerana ve aho nandre momba Italia. Italia no manana ny maro ny olana sy ny zavatra maro aza t-piasana, fa raha tena mahalala fa firenena fantatrao fa io no tena mahazatra ny lafiny amin’ny toerana maro eto amin’izao tontolo izao. Matetika no nofaritana ho toy ny pizza, ny paty sy ny mandoline, fa raha ianao marina mpandeha (ary satria ianao mamaky ity bilaogy ity dia tokony ho) fantatrao fa any Italia no tsy Roma, Venizy, Florence sy Milan. Misy ny lehibe isan-karazany ny isan-karazany ny endriky ny, ny lehibe indrindra ny lova ara-kolontsaina ny tontolo izao, ary maro ny zavatra tokony hatao. Eto dia afaka mahita ny oliva sy ny havoana mideza, te hatory tanàna amin’ny mahafatifaty cobbled-dalambe, be dia be ny tanim-boaloboka, tamin’ny moyen âge lapa, antitra ny fiangonana sy ny rehetra fa ny zavakanto ary ny tantara hanorina tany aloha. Noho izany, miangavy aza t hanoratra tsy misy dikany ny fanehoan-kevitra momba ny zavatra tsy t mahalala tsara. Izaho dia manoro hevitra anao ny rohy sasany izay hanampy anao hahafantatra Italia kely kokoa ary (angamba) mba hankasitraka izany.italia.izany faran’ny an-trano. I would love to visit Italia sy mijanona ao amin’ny anankiray amin’ireo tanàna kely. Izaho ve tsy efa avy amin’ny ANTSIKA fa ny foko foana no kely tany am-boalohany sy I don t hahatakatra ny antony. Misy toro-hevitra dia ho tsara noho ny diany voalohany. Mety tsy te-ho tonga any an-tranony aho ny fitiavana izany. Italia no tena mahatalanjona, ny zavatra hita, ny zavatra tiany, fofona, adventures aho amin’ny fitiavana ity firenena ity ary tsy afaka miandry ny hiverina. Aho tany Italia tamin’ny Mey, tiako ny zava-drehetra momba Italia. I indrindra tiany Florence. Te-hiverina amin’ny taona manaraka tamin’ny volana Mey. Efa mba hahitana raha izany fotoana izany aho dia afaka manao izany ao amin’ny teti-bola. Oh, ny Gelato no mahatahotra. Fotoana manaraka diniho mitsidika ihany koa ny sasany kely ny tanàna, toy ny Treviso, ohatra, hoe ny saha Venise, tena hilaza, tanindrazany ny Prosecco Divay sy ny tsara ho an’ny tsena. Hey daholo ny rehetra. Noho ny taonany ity lahatsoratra ity sy ny maha sarotra ny mifehy ireo hafatra maro amin’ny spam, ny fanehoan-kevitra eto efa niova ho eny
Ny lahatsary amin'ny Chat ny Lahatsary amin'ny Chat italiana maimaim-poana, tsy misy fisoratana anarana →